မင်္ဂလာဆောင် | ဇန္နဝါရီလ 2022
ကြည့်ရှုသူအများဆုံးအိမ်ထောင်ရေးအဆိုပြုချက်ဗီဒီယို ၁၂ ခု
2022 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: မင်္ဂလာဆောင်
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ယောက်ကအပြစ်ရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုလိုဒီနေရာတစ်ဝိုက်မှာဝန်ခံဖို့လိုတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့သေချာတယ် (ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာသက်သေပြပါ။ ) ဤဗွီဒီယိုများသည် YouTube တွင်အစဉ်အဆက်စုဖွဲ့နေသောကွန်ပြူတာအခိုက်အတန့်များကိုစုဆောင်းထားပြီး၎င်းတို့သည်ကြည့်ရမည်ကိုသင်သိသည်။ မင်းဘယ်နှစ်ယောက်မြင်ပြီးပြီလဲ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Matt Still ကသူ့ချစ်သူ Ginny ကိုအဆိုပြုခဲ့တယ်။ သူသည်သူမရုပ်ရှင်စရန်စောင့်နေစဉ်အတွင်းပြသခဲ့သောရုပ်ရှင်များကိုမနာလိုဖြစ်စေသောရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကိုလှောင်ပြောင်ကာဖန်တီးခဲ့သည်။ စကားမရှိဘူး။ ပြီးခဲ့သည့်နွေရာသီကလူကြိုက်များခဲ့သော Isaac ၏ live lip-dub အဆိုကိုသတိရပါ။ ဒီစွဲမက်ဖွယ် choreographed performance ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့လူ ၆၀ ကျော်လောက်ကိုယူခဲ့တယ်။ ဒီကောင်လေးကသူ့ကောင်မလေးကိုအဆိုပြုခါနီးမှာအဆောက်အ ဦး တစ်ခုပေါ်ကနေပြုတ်ကျဟန်ဆောင်ပြီးနှလုံးဖောက်ပြန်တာကိုပေးခဲ့တယ်။ အင်း၊ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပါ။ ကြောက်မက်ဘွယ်သောလက်ထပ်ခြင်းဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်ရန်သော့ချက်ကားအဘယ်နည်း။ ကခုန်! ကခုန်တာများတယ်။ Disneyland တွင်ဂီတပုံစံအတွက်အဆိုပြုခြင်းကိုခဏလောက်စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ကဲရယ်ဖို့အတွက် play play ကိုနှိပ်ပါ။ သူ၏အခြေခံလေ့ကျင့်မှုသင်တန်းဆင်းသင်တန်း၏အကူအညီဖြင့်ဤစစ်သားချစ်သူသည်သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစုများရှေ့တွင်သူ၏ကောင်မလေးကိုအဆိုပြုသည်။ သင်၏ S.O ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း စဉ်းစားစရာတစ်ခုကအရေးပေါ်ဆိုတာနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်
၇ အော်စကာ de la Renta မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာများ
Paperless Post သည် Oscar de la Renta နှင့်လက်တွဲမှုအသစ်ကိုကြေငြာခဲ့ပြီးဖိတ်ကြားချက်များသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ဒါတွေကသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့လေယာဉ်ပြေးလမ်းပုံစံတွေနဲ့ဘေးချင်းကပ်နေတဲ့မင်္ဂလာစာရေးကိရိယာအစုံ ၇ ခုပါ။ အေး! မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာ ၁ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာ ၂ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာ ၃ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာ ၄ မင်္ဂလာဖိတ်ကြားလွှာ ၅ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာ ၆ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ကြားလွှာ ၇ Paperless Post တွင် Oscar de la Renta ၏ကမ်းလှမ်းချက်အားလုံးကိုကြည့်ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ ဒီမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတွေထဲကဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးလဲ။
၄ စားသုံးနိုင်သောမင်္ဂလာဆောင်များ - Yum
ငါဒါကိုချစ်တယ်၊ အရမ်းလှတယ် Ketubah!
Rory နဲ့ငါကငါတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဘာသာရေးတစ်တန်မှမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူ့ဂျူးအမွေအနှစ်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့ဖန်ခွက်ကိုချိုးပြီးငါတို့ဂျူးလက်ထပ်စာချုပ်တစ်ခု ketubah ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့တယ်။
ငါအဲဒါကိုကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဖန်စီဝတ်စုံငှားတာ။ တွေ့ချင်တယ်? (မင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်တွေအများကြီးရှိရင်မင်းဒီစာကိုဖတ်ရမယ်။ )
Rory နှင့်ငါသည်သူ၏သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနား၌ရှိနေခဲ့သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာငါတို့သည်ပွဲတက်ဝတ်စုံများကိုသုံးညဆက်တိုက်တက်ရောက်ခဲ့ရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ငါ့ဗီဒိုထဲမှာနေရာယူဖို့အခြားဖန်စီဝတ်စုံ ၀ ယ်ဖို့စိတ်ကူးကိုငါမခံနိုင်ခဲ့ဘူး ...
ကြောက်စရာကောင်းသောမင်္ဂလာဆောင်လက်ဆောင် ၃ မျိုး သင်ရရှိဖူးသမျှအဆိုးဆုံးအရာကဘာလဲ။
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူတို့ရဖူးတဲ့အဆိုးဆုံးလက်ဆောင်တွေအကြောင်းသူငယ်ချင်းတစ်စုကိုငါမေးခဲ့တယ်၊ သူတို့ကတော်တော်ဆိုးတယ်။ ဤတွင်အဆိုးဆုံးသုံးချက်မှာ
သင်အကြိုက်ဆုံးတီဗီရှိုးများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့်အခြားအရာများမှမစို့ပို့နိုင်သောမင်္ဂလာဆောင် ၁၀ ချက်
တစ်ခြားတစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဘာသာရေးမင်္ဂလာဆောင်ကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်ငါလုံးဝဆင်းနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်စာတွေရွေးဖို့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါအဲဒါကကောရိန္သုသားတွေအားလုံးနဲ့ဒေသနာတွေအဲဒါကိုအတင်းလုပ်ခိုင်းသလိုခံစားရတယ်။ Rory နဲ့ငါကဘာသာမတူပါဘူး သူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားဟာသူမရဲ့အဆုံးအစမဲ့ရယ်မောခြင်းဟာသူတို့ရဲ့အတန်းမှာပထမခြေလှမ်းဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့လက်ကသူမကိုထာဝစဉ်ဆုပ်ကိုင်ထားလိမ့်မယ်။ သူ့အပြုံးကရိုးရှင်းပါတယ်။ အဖြေရလိမ့်မည်၊ သူ၏အဖြေသည်ငါကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သောမင်္ဂလာဆောင်ဖတ်ခြင်းထက်စာအုပ်များ၊ တီဗွီနှင့်စာအုပ်များမှအကောင်းဆုံးမင်္ဂလာဆောင် ၁၀ ပါးအတွက်ဆလိုက်ရှိုးတစ်ခုအဖြစ်စုစည်းထားသောကျွန်ုပ်၏မင်္ဂလာဆောင်စာဖတ်ခြင်းကိုတွန်းအားပေးသည်။ ရုပ်ရှင်များ။ ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအပိုင်း-ကျွန်ုပ်တို့၏ kick-ass အနုပညာဌာနသည် ၉၀၂၁၀၊ မှတ်စုစာအုပ်၊ အချစ်၊ တကယ်တမ်းနှင့်အခြားအရာများမှဖတ်စာတစ်ခုစီမှဆွဲထုတ်ထားသောကိုးကားချက်ပုံစံကို၎င်း၊ ၎င်းသည်တစ်ခုတည်းသောကွတ်ကီးများကတည်းက Pinterest အတွက်အကောင်းဆုံးအရာဖြစ်သည်။ မရ။ ရိုးရာမင်္ဂလာဆောင်စာများဖတ်ချင်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်လုံးဝကွဲပြားတဲ့အရာလား။
မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဆံပင်ကိုကျစ်ဆံမြီးကျစ်ရန်နည်းလမ်းအသစ် ၅ မျိုး
လှပသောမင်္ဂလာဆောင်နှင့်သတို့သမီးအရံသတို့သမီးဝတ်ထားသောကျစ်ဆံမြီးထက်ကျစ်ဆံမြီးထက်ပိုရင်ခုန်စရာကောင်းသောအရာရှိပါသလား။ အဖြေကမဟုတ်ဘူးလို့ငါဆက်ပြီးခံစားရတယ်။ ကျစ်ဆံမြီးပုံသဏ္ofန်ကိုငါတို့ငြီးငွေ့လာတယ်လို့ငါတို့ထင်တဲ့အခါမှာငါတို့ကရီစရာကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဗားရှင်းအသစ်တွေထွက်လာတယ်။ ဒါကတော့ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးမကြာသေးမီကကျစ်ဆံမြီးစိတ်ကူးငါးခုပါ။ မင်္ဂလာဆောင်မှာဘယ်ဟာကိုဝတ်ချင်လဲ။ Margot Robbie ၀ တ်ဆင်ခဲ့သောသရဖူဆောင်းထားသောကျစ်ဆံမြီးအသစ်များမှလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ၂။ Molly Sims ၏အေးမြသောတစ်ဝက်စည်းထားသောကျစ်ဆံမြီးများကို Sarah Potempa (@sarahpotempa) ကသြဂုတ်လ ၈ ရက် ၂၀၁၄ တွင်နံနက် ၉ နာရီ ၂၈ မိနစ် PDT ၃ ။ Victoria's Secret မော်ဒယ် Lindsay Ellingson ၏နူးညံ့သောပြင်သစ်ကျောကျစ်ဆံမြီး Lindsay Ellingson (@lindsellingson) ကအောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်၊ ညနေ ၇ နာရီ ၂၀ မိနစ် PDT ၄ တွင်တင်ထားသောဓာတ်ပုံသည်ဤ pigtails နှစ်ခုကိုပေါင်းခြင်းထက်အနည်းငယ်ပိုလိုအပ်သည် မရ။ ၅။ Judy Greer တွင်တွေ့ရသောဤစွဲမက်ဖွယ်ကျစ်ဆံမြီး လုပ်နည်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။ အပြောင်အပြက်က Brigitte Bardot ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည်။ မင်္ဂလာဆောင်ကျစ်ဆံမြီးအတွက်ဤစိတ်ကူးများထဲကတစ်ခုခုကိုကြိုက်လား။ စိတ်ထဲတွင်ကွဲပြားသောကျစ်ဆံမြီးရှိသလား။
8 Dainty Engagement Rings - အားလုံး ၈၀၀ အောက်ဖြစ်သည်။ မင်းဘယ်ဟာဝတ်မလဲ။
Save the Date reader Kirstin သည်သူမ၏အိပ်မက်၏စေ့စပ်လက်စွပ်ကိုမတွေ့နိုင်ပါ။
မင်းမနှစ်သက်တဲ့ရောင်စုံကျောက်ခဲ ၂ လုံးအပါအ ၀ င် Super-Unique Real-Girl စေ့စပ်လက်စွပ် ၅ လုံး၊
ငါစေ့စပ်လက်စွပ်တိုင်းကိုငါမြင်ဖူးပြီလို့ထင်တဲ့အခါတိုင်း၊ ဒီစူပါထူးခြားတဲ့စေ့စပ်လက်စွပ် ၅ ကွင်းကိုတွေ့ဖို့ငါ့ inbox ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒီနေ့အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးဖို့ခက်လိမ့်မယ်။ စေ့စပ်လက်စွပ် ၁ အလက်ဇန္ဒာ၏ယောက်ျားသည်ဤလက်စွပ်ကိုလက်မှုပညာဖြင့်လက်မှုပညာဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ငါ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စတိုင်လ်ကိုဖမ်းစားနိုင်တဲ့လှပပြီးဂန္တ ၀ င်လက်စွပ်ကိုဖန်တီးရာမှာသူလုပ်ခဲ့တဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုငါအံ့သြနေတုန်းဘဲလို့သူမကပြောတယ်။ စေ့စပ်လက်စွပ် ၂ ဤဖတ်သူ၏လက်စွပ်သည်သူမ၏သတို့သားအဘိုးအဘွားထံမှစိန် ၁၇ လုံးပါဝင်သည်။ စေ့စပ်လက်စွပ် ၃ တေလာ၏ယောက်ျားသည်အလွန်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောအဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူမ၏အမေထံမှစိန်တစ်ပွင့်ပါသောဤလက်စွပ်ကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ 'ငါ့အမေကငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါ၊ သူကလောကကြီးကိုကျော်လွန်ပြီးသူကငါ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်' ဟုသူမကဆိုသည်။ စေ့စပ်လက်စွပ် ၄ Brittany နဲ့သူမရဲ့ယောက်ျားကလက်စွပ်ပေါ်မှာအခြေချပြီးတော့စတိုးဆိုင်ကစတိုင်လ်ကိုမရောင်းတော့ဘူး။ ကံကောင်းစွာဖြင့်သူသည်တက္ကဆက်၌ကျန်ရှိသောကွင်းသုံးကွင်းအနက်မှတစ်ခုကိုခြေရာခံနိုင်ခဲ့ပြီးကယ်လီဖိုးနီးယားသို့ပျံသန်းနိုင်ခဲ့သည်။ စေ့စပ်လက်စွပ် ၅ Kelsey ၏ချစ်သူသည်မိုးသီးမုန်တိုင်းတိုက်နေစဉ်အဆိုပြုလွှာမတင်မီသုံးပတ်အလိုတွင်ဤ art deco citrine စေ့စပ်လက်စွပ်ကိုသယ်ဆောင်လာသည်။ ဒီစေ့စပ်လက်စွပ်တွေထဲကဘယ်ဟာကိုအကြိုက်ဆုံးလဲ။ သင်ကြိုက်လျှင်
I do or I don't: မင်္ဂလာဆောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်သည်သူမ၏မင်္ဂလာဆောင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုခံရသော Engagement Chick နှင့်စကားပြောနေခဲ့သည်။ (တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြီးပြည့်စုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထို့နောက်မင်္ဂလာဆောင်မည့်လများအတွင်းမွမ်းမံခြင်း) ကျွန်ုပ်၏အကြံဥာဏ်?
ယနေ့နာမည်ကြီးသတို့သမီးအရံများတွင် Snooki သည်သူမ၏ BFF ၏မင်္ဂလာဆောင်အတွက်အတောက်ပဆုံးသတို့သမီးဝတ်စုံကို ၀ တ်ခဲ့သည်။
တချို့သတို့သမီးလေးတွေကသူတို့ရဲ့သတို့သမီးအရံတွေကိုရှုခင်းနဲ့ရောချင်ကြတယ်။ သူတို့ကသတို့သမီးအ ၀ တ်များကို understated အရောင်များနှင့် ho-hum ပုံစံများဖြင့် ၀ တ်ဆင်ကြသည်။ မနေ့ကလက်ထပ်ခဲ့တဲ့စနူကီရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဂျက်ကီကဆန့်ကျင်ဘက်နည်းလမ်းကိုသုံးပြီးသူမရဲ့သတို့သမီးအရယ်သမ်းမှုအတွက်မင်းမြင်ဖူးသမျှထဲမှာအတောက်ပဆုံး၊ အတောက်ပဆုံးသတို့သမီးဝတ်စုံတွေကိုရွေးခဲ့တယ်။ Nicole Snooki Polizzi (@snookinic) တင်ထားသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံ၊ စက်တင်ဘာ ၁၃ ရက် ၂၀၁၅ ခုနှစ်ည ၇ နာရီ ၄၈ မိနစ် PDT ဒီပုံက bling factor ဒါမှမဟုတ်အရောင်မျှတမှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုယုံကြည်ပါ။ ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုသက်တမ်းမကုန်မီ Snooki's Snapchat (username: nicsnooki) ကိုအမြန်စစ်ဆေးပါ။ သူမသည် sequin စက်ရုံတစ်ခုတွင်ဆုံးပါးသွားလျှင် Peaches N Cream Barbie နှင့်တူသည်။ အတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့။ ငါဆိုလိုတာကအဲဒါကငါ့သတို့သမီးအရံတွေအတွက်ငါရွေးတဲ့ဝတ်စုံအတိအကျလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့သတို့သမီးအရံတွေကိုတောက်ပတောက်ပနေစေဖို့အတွက် A+ ကသူတို့ကိုညစ်နွမ်းစေမယ့်အ ၀ တ်အစားတစ်ထည်ကိုရွေးလိုက်တယ်။ PS: မင်းဂရုမစိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် Snooki ဟာဒီတနင်္ဂနွေမှာတစ်ခုတည်းသောတကယ့်ကြယ်ပွင့်သတို့သမီးအရံမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ICYMI: Snooki's Wedding Album: Let's Overanalyze the
မင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာမင်းလိုအပ်တာကိုမင်းမသိခဲ့တဲ့အချက် ၅ ချက်
Sandy Malone သည် Puerto Rico ကမ်းခြေရှိ ဦး တည်ရာမင်္ဂလာဆောင်စီစဉ်သည့်ကုမ္ပဏီ Vieques ၌မင်္ဂလာဆောင်များကိုပိုင်ဆိုင်သူ Sandy Malone သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှစ၍ မရေမတွက်နိုင်သောစုံတွဲများအားသူတို့၏နေ့ကြီးရက်ကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။ သတို့သမီးလေးတို့ရေသူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေ ငါ့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကသူတို့ကိုယ်သူတို့ဘယ်တော့မှထင်မထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အသေးစိတ်တွေရှိတယ်၊ အဲဒါကငါ့ကိုသူတို့ကိုသတိပေးဖို့မင်္ဂလာဆောင်စီစဉ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ရှိနေတာဘဲ။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေ့ကြီးကိုစီစဉ်တဲ့အခါမင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်ဖို့အောက်ပါအချက်တွေကိုမင်းသေချာမှတ်ထားသင့်တယ်။ 1. မင်္ဂလာဆောင်နေ့လည်စာအတွက်သတို့သမီးများစွာတို့သည်မင်္ဂလာဆောင်နေ့တွင်သူတို့နှင့်သတို့သမီးအားကျွေးမွေးရန်အထူးအစီစဉ်များပြုလုပ်ရန်မေ့လျော့နေကြသည်။ အထူးသဖြင့်မင်းကကိုယ့်အိမ်ထဲမ ၀ င်ရင်အထူးသဖြင့်မင်းရဲ့အဖွဲ့သားတွေအားလုံးကိုတီးမှုတ်တာထက်ကြိုတင်စီစဉ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကသတို့သမီးလေးကသတို့သမီးလေးယောက်အတွက်သစ်သီးနဲ့ဒိန်ခဲတစ်ပန်းကန်သာတောင်းခဲ့ပေမယ့်သူမကိုယ်တိုင် Sandwich တစ်ခုတောင်းခဲ့တယ်။ ၂။ လူတိုင်းအတွက်အလှအပချိန်းဆိုမှုများပြုလုပ်နေစဉ်သတို့သမီးသည်တဲဘ်ကိုကောက်ရန်မလိုအပ်ပါ
အမြော်အမြင်မရှိ၊ မတော်တဆမဟုတ်သောသတို့သမီးအရံလက်ဆောင်စိတ်ကူးများ ၃၃
လက်ဝတ်ရတနာမှ luxe skin care သို့သူတို့ကိုယ်တိုင်မ ၀ ယ်ဘဲအကောင်းဆုံးသတို့သမီးအရံလက်ဆောင်စိတ်ကူးများသည်လက်တွေ့ကျပြီးကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၀ တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သောရွေးချယ်စရာ ၃၃ ခုကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။
DIY မင်္ဂလာဆောင်စိတ်ကူး၊ သတို့သမီးအ ၀ တ် ၀ တ်ပုံကို Blah နည်းနည်းကြည့်ပါ
a) အမြဲလိုလို ho-hum သတို့သမီးအ ၀ တ် ၀ တ်ကိုဝတ်ခဲ့ဖူးသူ b) သူမ၏သတို့သမီးအရံများကိုသတို့သမီးအ ၀ တ် ၀ တ်စုံ (ရိုးရှင်းသောအ ၀ တ်များသည် buncha ပုံနှိပ်များထက်ပိုကြည့်ကောင်းသည်) (သို့) c) ယေဘူယျအားဖြင့်သတို့သမီးအ ၀ တ်များ ၀ တ်ဆင်ထားသည်၊ သင်၏ခြေအိတ်များကိုချက်ချင်းပေါက်ကွဲစေရန်ပြင်ဆင်ပါ။ ကြည့်ပါ၊ ကြောက်မက်ဘွယ်သော DIY သတို့သမီးအရံဝတ်စုံ spiffer-upper
ငါလုပ်ရင်ငါမလုပ်ဘူး။ Sneakers ထဲကသတို့သမီး
Save the Date စာဖတ်ပရိသတ်တွေရဲ့လေးပုံသုံးပုံကသတို့သားကိုမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာဖိနပ်စီးဖို့ကြိုပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သတို့သမီးကော။
လိင်တံချောင်းများမပါ ၀ င်သော Bachelorette ပါတီလှုပ်ရှားမှု ၅
သင် 'Bachelorette!' ခါးပန်းနှင့်ပါလာသောလိင်တံကောက်ရိုးအားလုံး၊ ငါတို့သွားပါဟုဆို၏။ မင်းရဲ့ bachelorette party ကမင်းရဲ့ပျော်စရာဖြစ်သင့်တယ်၊ ပြီးတော့ရိုက်ချက်တွေ၊ ဘားတွေမှာကခုန်တာတို့ပါ ၀ င်တယ်ဆိုရင်အဲဒါပဲဖြစ်ရမယ်။ ဒါမှမဟုတ်လိင်တံကာကွယ်တာထက်မင်းသေချင်ရင်ဒီမှာမင်းရဲ့ bachelorette ပါတီအတွင်းမှာအချိန်ကိုကုန်လွန်စေမယ့်အခြားရွေးချယ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်ငါးချက်ရှိပါတယ်။ (အချို့ကမင်္ဂလာဆောင်ရေချိုးခန်းအတွက်ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်။ ) The Nail Truck (@thenailtruck) တင်ထားသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်၊ ၁၂ နာရီ ၃၄ မိနစ် PDT တွင်အုပ်စုနှုန်းနှင့်တောင်းဆိုရန်ကြိုတင်မှာယူပါ။ ခြေနင်းအတွက်ထိုင်ခုံများ သို့မဟုတ်ကယ်လီဖိုးနီယား၊ Orange County ရှိသတို့သမီးများ၊ သင့်အား spa spa ကိုယူဆောင်လာသည့်စပျစ်သီး Airstream ၌ mobile Nail Truck ၌ခေါ်နိုင်သည်။ သတို့သမီးနှင့်သတို့သားအတွက် Date Jar တစ်ခုပြုလုပ်ပြီးမင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်သတို့သမီးနှင့်သတို့သမီးတို့အတွက်ပျော်စရာကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအကြံပြုရန် popsicle sticks နှင့် sharpie ကိုသုံးပါ။ သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့နေ့တစ်နေ့အပြီးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ရေးကိုဆက်လက်ရှင်သန်စေမယ့်သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်တစ်ရက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Lora Mae Photography မှဓာတ်ပုံအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရေမွှေးဒီဇိုင်း DIY အမွှေးနံ့သာအရက်ဆိုင်များသည်တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ပေါ်ထွက်လာသည်။ (googling လုပ်ကြည့်ပါ
Romantic Hidden Message နှင့်အလွန်ထူးခြားသောမင်္ဂလာလက်စွပ်။ ငါအစွဲအလမ်းကြီးတယ်
ဒီအပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Erica Weiner site မှာဒီ circa-1880 လက်စွပ်ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်၊ အဲဒါကိုလက်ထပ်လက်စွပ်အဖြစ်ငွေကောက်ခံမထားပေမယ့်အထူးသဖြင့်မင်းကမင်းရဲ့စေ့စပ်လက်စွပ်ကိုမင်းရဲ့ညာလက်ကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ မင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးရင် (အလုပ်များသောစေ့စပ်လက်စွပ်များရှိသောမိန်းကလေးများစွာသည်ထိုသို့ပြုလုပ်ပုံရသည်။ ) လက်စွပ်တွင် amethyst၊ စိန်၊ opal၊ ပတ္တမြားနှင့်အဝါရောင်ရွှေအစုံတို့ပါ ၀ င်သည်။ Amethyst Diamond Opal Ruby Emerald ကိုရယူပါ။ ဒီဒီဇိုင်းကအများကြီးဖြစ်နေတာကိုငါနားလည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးရိုးရှင်းတဲ့ setting ထဲမှာလျှို့ဝှက်သတင်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုကော်ပီကူးဖို့အရမ်းလွယ်လိမ့်မယ်။ ချစ်စရာကောင်းသော! အချစ်ရေးလျှို့ဝှက်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုနှင့်လက်ထပ်လက်စွပ်တစ်ကွင်းလိုချင်ပါသလား။
သင်မစေ့စပ်မီသင်၏ယောက်ျားအကြောင်းမိဘများသိရန်လိုအပ်သောအချက် ၆ ချက်
မင်းစေ့စပ်မသွားခင်မင်းယောက်ျားအကြောင်းမင်းမှာရှိသင့်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုငါတို့ပြောပြီးပြီ။ မင်းရဲ့လက်ချောင်းမှာလက်စွပ်မ ၀ င်ခင်မင်းမိဘတွေကိုမင်းဘာဝေမျှသင့်လဲဆိုတာဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်။ ဒါတွေကတော့မင်းယောက်ျားအကြောင်းငှားရမ်းမှုတွေကိုပြောပြမယ့်အချက်တွေထဲကတချို့ပါ။
အမှတ်ရစရာမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားမှထွက်ရန်နည်းလမ်း ၆ ချက်
မင်းရဲ့ဧည့်သည်တွေဆီကအကူအညီနည်းနည်းလောက်နဲ့မင်းရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ထွက်ပေါက်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကလွယ်ပါတယ်။ မီးပွင့်များမှမီးပွင့်များအထိဤထွက်ပေါက်အိုင်ဒီယာများသည်ကျိန်းသေပေါက်ထိုက်တန်သည်။ ၁။ Pillar Candles ညအချိန်အခမ်းအနားသည်ဧည့်သည်များအားရင်ခုန်စရာဖယောင်းတိုင်များဖြင့်လမ်းထွက်ရန်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးပေးသည်။ 2. Streamers ဧည့်သည်များအားသင်၏အခမ်းအနားမှသင်ထွက်သည့်အခါရောင်စုံ streamers များကိုသုံးခြင်းဖြင့်အပြည့်အ ၀ ကျင်းပသောအခမ်းအနားသို့ခေါ်ဆောင်ပါ။ တောက်ပသောအရောင်များသည်ထာဝရစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောမင်္ဂလာဆောင်ပုံများကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ၃။ ပူဖောင်းများသင်၌ဘုရားကျောင်း၌နွေ ဦး သို့မဟုတ်နွေရာသီအခမ်းအနားရှိလျှင်ဧည့်သည်များကိုအမှန်တကယ်အားတက်ဖွယ်အခိုက်အတန့်ဖြစ်စေရန်ပူဖောင်းများပေးပါ။ ၄။ ပန်းပွင့်ပန်းများရွှေ့ပါ၊ ပန်းပွင့်လေးများ၊ ပန်းများသည်အတန်းမှာလျှောက်ရန်သာမဟုတ်တော့ပါ။ လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်းပန်းပွင့်ကိုဆမ်းခြင်းသည်တစ်နေ့တာ၏ကျန်ပွဲများကိုစတင်နိုင်ရန်အတွက်လှပပြီးပွဲလမ်းသဘင်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၅။ Bubbles Streamers များနှင့်ပန်းပွင့်များသည်လှပသော်လည်းအခမ်းအနားအပြီးတွင်သန့်ရှင်းရေးအပိုလိုအပ်သည်။ ပူဖောင်းများသည်ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသဖြင့်ပျော်စရာကောင်းသည်ထက်နှစ်ဆတိုးပါ၊ အလွန်စေးကပ်မနေပါနှင့်။ ၆. Sparklers မီးပွင့်မှထွက်သောထွက်ပေါက်သည်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမင်္ဂလာဆောင်ကိုဆွဲဆောင်ရန်သို့မဟုတ်တရားဝင်အခမ်းအနားတစ်ခုသို့ ၀ င်ရောက်ဆင်နွဲရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းနာမည် (သို့) monogram နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုးထားသောအပို sparkler ချောင်းများကိုတင်ပြပါ
Jay z နှင့် Beyonce တို့လက်ထပ်သည်